Last nohavaozina: Jul. 13 2019 | 3 min namaky
Ny olona ao San Francisco dia tena romantics; fantany ny fomba hiverina ny daty ho tanteraka daty. Na izany aza, amin'ny toerana lehibe maro mba handeha hanao daty ao an-tanàna, sarotra ny handeha ratsy amin'ny mampiaraka drafitra. Ny fizarana eto ambany ity miresaka ny sivy daty rehetra ao San Francisco kiraro handeha.
1. A mitaingina amin'ny Magic Bus SF
Magic Bus dia haka anao amin'ny 90 minitra psychedelic nandeha hizaha ny San Francisco. Nandritra izany fitsidihana mampientam-po haino aman-jery, dia hahazo ho vavolombelona ny be hippie niresaka momba ny kolontsaina sy ny maro hafa toy izany facades ny taona 1960. Dia hanome ilay dia ianareo sy ny mpiara-miasa maro ny fahatsiarovana mba hankamamy.
2. Ento azy ho any amin'ny Ranomasimbe Beach
Raha toa ka ny mpiara-miasa dia ivelan'ny trano mafana fo, izy ho antoka tia ity toerana ity. Ocean Beach no misy akaikin'ny Golden State Park; ny fotoana lany eto ianao dia ho mampientam-po sy mahafinaritra feno. Handray anjara amin'ny fiaraha-mientana toy ny manidina ny papango, tongotra lavitra, ary mitaingina bisikileta; ary avy eo dia mandany ora vitsivitsy miala voly miaraka mihoatra ny vera ny toerana tena molotov.
3. Mandehana any Mpanarato ny ariary ho sakafo maraina daty
Mpanarato ny ariary mbola tena feno olona saika mandritra ny andro; na izany aza, raha afaka mitantana ny mitsidika ny toerana eo anatrehan'i 9 a.m., dia azo antoka fa hanolotra anao ny fampiononana sy ny mpiara-miasa ianao maniry ho.
Manana ny ana-panahy ataony sakafo maraina, jereo ny ranomasina liona ka toy ny andro mandroso hankany amin'ny Pier 39 ho an'ny sasany fiantsenana. Mba hahatonga ny daty kely kokoa mahaliana, dia azonao atao ny maka ny tariby avy Mpanarato mitaingina fiara ny ariary ho Union Square.
4. A mitaingina bisikileta ny alalan 'ny Bay Area
Raha misy lavo daty, mandeha ho bisikileta mitaingina ny SF Bay Area. Ny zava-drehetra ianao, dia hiaina dia hanana ny mikasika ny olon-tiany; aoka kosa ho ilay loko, ny tsio-drivotra na ny ravina fofona.
5. Mandehana ho an'ny sarimihetsika daty manokana
Raha tokony handeha ho tsy tapaka sarimihetsika daty, lohany ho Castro Theater, ny lapa sy sarimihetsika malaza iray amin'ireo manan-tantara malaza indrindra ao San Francisco fari. Hafa noho ny fampiantranoana repertory filma sy ny sarimihetsika fety, izany ihany koa ny dingan'ny ny isan-karazany ny zava-nitranga manokana.
6. Mandania ora vitsy in Forbes Island
Izany fotsiny dia tsy afaka mahazo kokoa noho izany tantaram-pitiavana; hitsidika Forbes Island amin'ny malalanao dia ho azo antoka fa manana ny daty lahatsoratra lehibe fahatsiarovana.
Anontanio ny vadinao na ny ankizivavy namana mba hitondra ny palitao azy toy ny tsio-drivotra matetika somary mangatsiaka eto. Raha manadino mba hampahatsiahy azy, aza manahy; fanatitra ny palitao na akanjo dia efa ela, fa tena mamy fomba fanaovana ny vehivavy mahatsapa tiana.
7. Drafitra ny rivotra mafana baolina fingotra kilalao mitaingina
Vavolombelona filentehan'ny masoandro tao San Francisco avy amin'ny rivotra mafana baolina fingotra kilalao; ny malalanao dia azo antoka fa ho talanjona amin'ny sahisahy safidy. Izany no tonga lafatra mampiaraka hevitra noho ny mankalaza ny manokana fotoana. Hifarana ny ankalamanjana amin'ny sakafo lehibe sy ny Champagne toast.
8. A nankany Crissy Field
Crissy Field dia hanatitra anao hiverina isan-karazany fahafahana ara-dalàna ho any amin'ny tantaram-pitiavana ankalamanjana daty. Ny toerana, izay ampiasaina indray mandeha ho US Army aerodrom, izao no nampidirina tao an-Golden Gate National Recreation Area.
Amin'ny Crissy Field, dia afaka manidina ny papango, manana kapoaka ny kafe amin'ny iray teo akaiky teo fisotroana kafe, na fotsiny ny sasany tony mandany ora miaraka amin'ny mpiara-miasa mijery ny moramora novakivakin'ny onja sy ny mahatalanjona amoron-tsiraka toerana manodidina.
9. Mandehana ho tohatra mandeha
Mety hiseho ho tena tsotra mampiaraka hevitra, fa rehefa any San Francisco tohatra mandeha tsy misy tokoa ny tsy maintsy-hanandrana niaraka safidy. Ny tanàna dia ho any an-trano maro tsy manam-paharoa sy kanto ny tohatra; Maro amin'ireo tohatra dia hita lavitra, ary vokatr'izany dia manana tantaram-pitiavana tsara tarehy backdrops. SF tohatra roa lehibe izay manao mampiaraka toerana no Lyon Street Dingana, ary faha-16 Avenue Tile Dingana.
Ireo daty sivy monja ny olona ao San Francisco dia tokony tsy tara mitranga. Inona no be momba azy ireo dia ny hoe dia tsy mila mandany an'arivony dolara na inona na inona ny amin'ireo daty ireo, nefa dia hahazo ny hipetraka hay hadinoina sy tia ny fotoana amin'ny mpiara-miasa.